Iingcamango eziphambili zoluntu kukuqokelelwa kweempawu, izimo zengqondo kunye neenkolelo ezenza indlela ejonga ngayo inyaniso. Nangona kunjalo, izazi zentlalo zithi ingcamango ephezulu kukuba enye yeengcamango ezininzi ekudlaleni kwaye ukuqala kwayo kukuphela kwendlela ehluke ngayo kwezinye iimbono ezikhuphisanayo.
Iingcali zezobudlelwane bezentlupheko zihluke kwiindlela ezivelele ngayo.
I-theorists echaphazeleke yimibhalo kaKarl Marx noFriedrich Engels igcina ukuba iinjongo eziphambili zihlala zimela iimfuno zesigaba esilawulayo phezu kwabasebenzi. Ngokomzekelo, ingcamango yeYiputa yamandulo eyayimela uFaro njengonkulunkulu ophilileyo kwaye ngenxa yoko ingapheliyo ichaza ngokucacileyo iminqweno kaFaro, ubukhosi bakhe kunye nentloko yakhe. Iingcamango eziphambili ze-capitalism bourgeois zisebenza ngendlela efanayo.
Kukho iindlela ezimbini apho i-ideological dominance iqhutyelwa phambili, ngokweMarx.
Ukusasazwa ngokusesikweni ngumsebenzi wobugcisa bezithethe ngaphakathi kwinqanaba elilawulayo: abalobi balo kunye neengqondo, abesebenzisa amajelo aseburhulumenteni ukusabalalisa iingcamango zabo.
Ukusasazeka ngokukhawuleza kwenzekayo xa imeko yolondolozo lwamajelo iphelele ngokupheleleyo ekusebenziseni kwayo izinto ezingundoqo ezingenakucelwa. Ukuzimelela phakathi kwabasebenzi bezakhono, abaculi kunye nabanye baqinisekisa ukuba iinjongo eziphambili azichaswanga kwaye isimo salo sihlala
Ngokuqinisekileyo, uMarx no-Engels baxela ukuba ukuguqulwa kwengqondo kuya kutshabalalisa iingcamango ezinjalo ezazigcina amandla kubantu. Ngokomzekelo, izenzo zokudibanisa kunye nokudibanisa ziza kuphazamisa imbono yehlabathi ephakanyiswe ngcamango ephezulu, njengoko ezi zibonakaliso zengcamango yokusebenza.
Ukuqonda iiNgcaciso zaBucala kunye noLuntu
Ulwahlulo lwamaKlasi kunye noLwazi
Ukuqonda ukuCetyiswa kweClass kunye nokuQaphela okungamanga
Yintoni ehamba phambili nge-o permiso de viaje para regresar Estados Unidos
Indlela yokuCoca i-Bowling Spares kubadlali abadla ngokufanelekileyo
Iingoma ezi-10 eziphezulu zePop yase-1998
Indlela Yokugwema Amahlaya Okuhlaselwa NgamaYuda, Imigqaliselo Yomdlelwane kunye neZenzo zokuLungulwa kwamaCala